Is Visual Studio Code Iyo Yakanakisa OSX Kodhi Edhiyo Pamusika? | Martech Zone
Vhiki rega rega ndinopedza nguva neshamwari yangu yakanaka, Adam Mudiki. Adhamu mugadziri mukuru… akagadzira yose real estate kushambadzira chikuva izvo zvine zvisingaite maficha - kunyangwe kungo wedzera akananga-ku-tsamba sarudzo kune avo vamiririri kutumira maposadhi vasina kana kumbozvigadzira!
Kufanana neni, Adam akagadzira mhiri kwehuwandu hwemitauro yekuronga uye mapuratifomu. Ehezve, anozviita zvine hunyanzvi uye zuva rega rega nepo ini ndakanamatira kukudziridza vhiki rega rega kana zvakadaro. Handichanakidzwi nezvandaimboita… asi ndichiri kunakidzwa.
Ini ndanga ndichigunun'una kuna Adam kuti ndanga ndapfuura nemadhivhuru edhita edhisheni gore rino, ndisingafarire chero yadzo. Ini ndinoda edhita kodhi idzo dzinooneka dzakanaka - saka yakasviba modhi yakakosha, ine auto-fomati yekodhi, uye auto indents kodhi, iyo inobatsira kuona zvikanganiso zve syntax, uye pamwe kunyange iine hungwaru hwekuzadzisa zvaunenge uchinyora. Akabvunza…
Wakamboedza Microsoft Visual Studio Code?
Chii? Ini handina kumisikidzwa mupepeti weMicrosoft kubva pakunyora nekurwira kumhanya C # makore gumi apfuura.
Ehe… iwe unogona kuwedzera izvo zvinowedzerwamo mairi… zvakanakisa.
Saka, nezuro husiku ini ndakadzora Visual Studio Code… Uye akanyatsofurwa nemhepo. Iri kutsva nekukurumidza uye inoshamisa.
Zvimiro zvinosanganisira rutsigiro rwekugadzirisa dambudziko, kujekesa kwes syntax, kupedzisa kodhi dzenjere, zvinyorwa, kodhi kugadzirisazve, uye yakadzamidzirwa Git. Unogona kushandura iwo madingindira, mapfupi ekhibhodi, uye matani ezvekuda kuti zviite zvako.
Visual Studio Code Kuwedzeredzwa
VS Code yekuwedzera inoita kuti iwe uwedzere mitauro, madhigi, uye maturu kune ako ekuisa kutsigira yako yekufambisa yekufambisa VS Code's extensibility modhi inoita kuti vanyori vekuwedzera vavharike vakananga muVS Code UI uye vape mashandiro kuburikidza neayo maAPI anoshandiswa neVS Code.
Uya neZviratidzo zvekuwedzera nekudzvanya pane iyo Yekuwedzera icon mu Chiitiko Bhawa kudivi reVS Code kana iyo Wona: Kuwedzeredzwa raira uye iwe unogona kuisa ekuwedzera zvakananga kubva mukati meVisual Studio Code pasina kana kutangazve iyo app!
Kana iwe wakandiudza makore mashoma apfuura kuti ndinenge ndiri kuronga zvakare muMicrosoft Code mupepeti, pamwe ndingadai ndakaseka… asi ndiri pano!
Dhaunirodha Visual Studio Code